Fampiasam-bola aty Afrika: tetikasa miisa 306, mitentina 208,8 miliara dolara | NewsMada
Fampiasam-bola aty Afrika: tetikasa miisa 306, mitentina 208,8 miliara dolara
« Tsy tokony hiantehitra amin’ny fanampiana intsony i Afrika fa hifantoka amin’ny fampiasam-bola », hoy i Akinwumi Adesina, mpahay toekarena mijery ny zava-misy aty Afrika. Nambara tao Afrika Atsimo, ny 9 novambra teo, ny fanombohana ny “Africa Investment Forum” (AIF). Afa-tsy firenena vitsivitsy, indrindra ireo mampiasa teny frantsay, hita ho mihetsika ny toekarena aty Afrika, araka ny fanamarihan-dry zareo nivory. Maro ny filoham-panjakana sy lehiben’ny governemanta nanatrika ny fihaonana tao Afrika Atsimo, niampy ireo mpandraharaha 330 nifanakalo hevitra sy traikefa.
Ho an’ny AIF, tetikasa 306 mitentina 208,8 miliara dolara ny atokana ho amin’ny fampiasam-bola, hampiova ny kaontinanta afrikanina tsy ho tratra aoriana intsony.
Tahirim-bola karazany maro ny ao anatin’izany AIF izany ka nasongadina manokana izay manana tetikasa mazava. Sehatra navoitran’i Akinwumi Adesina, mbola tsy ampy lavitra ny fampiasam-bola aminy, toy ny eto Madagasikara: fotodrafitrasa, angovo, fambolena. « Manana ny hoaviny i Afrika ho amin’ny fampandrosoana aorian’i Sina », hoy ihany io mpahay toekarena io.
108 miliara dolara isan-taona ho an’ny fotodrafitrasa
Ny zava-misy amin’izao fotoana izao, miteraka fatiantoka ny faharatsian’ny fotodrafitrasa, ohatra, ny seranan-tsambo, lalamby, lalana. Tsy takona afenina izany eto Madagasikara. 68 hatramin’ny 108 miliara dolara isan-taona ny fahavoazana aterak’izany tsy fisian’ny fotodrafitrasa izany, raha ny tatitra navoakan’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad). « Midika izany fa ahitana fampiasam-bola 68 hatramin’ny 108 miliara dolara isan-taona aty Afrika momba ny fotodrafitrasa fotsiny », hoy ihany i Akinwumi Adesina.
Ho an’ny angovo, ohatra, 30 miliara dolara isan-taona raha vonona ny hitrandraka azy ny avy amin’ny rano, ny masoandro, ny gazy. Mandany hatrany amin’ny 5 600 miliara dolara anefa ny orinasa afrikanina eo amin’ny angovo mandritra ny fito taona monja. Mametraka fandaharanasa lehibe ny Bad izao momba ny angovo avy amin’ny masoandro.